प्रा.डा. अजय रिसाल, Author at साहित्यपोस्ट
प्रा.डा. अजय रिसाल3लेखहरु0comments
प्रा.डा. अजय रिसाल	 ८ असार २०७९ ०९:०१ 0
(१) डाक्टरसाब ! मलाई प्रत्येक महिनाजसो करिब दुई तीन दिन जति “झर्को लागेजस्तो हुने, कसैसँग बोल्नै मन नलाग्ने, अत्यासजस्तो हुने, रोऊँ–रोऊँजस्तो लाग्ने, बिना कारण नै रिस उठ्ने” जस्ता लक्षणहरु आउँछन् । फेरि केही दिनपछि ती सारा लक्षणहरु…
प्रा.डा. अजय रिसाल	 २५ जेष्ठ २०७९ १८:०२ 0
“यसलाई त औँसी–पुर्ने हुने हो ।” काभ्रे जिल्लाकै एउटा गाउँको माध्यमिक विद्यालयका ४५ वर्षीय शिक्षकले आफ्नी ४० वर्षकी श्रीमतीमा देखिने गरेको लक्षणहरुका बारेमा हाम्रो ओपिडीमा कुरा गर्दैथिए । साथमा थिए ती दम्पतीका २० वर्षे जेठा छोरा रवि ।…
प्रा.डा. अजय रिसाल	 ११ जेष्ठ २०७९ ०७:०१ 0
....डाक्टरसाब ! म दुःखी आत्मा । मेरो बाँच्नुको पो के प्रयोजन ? मलाई मर्न नै दिनुभएको भए हुन्थ्यो । यो स्वार्थी दुनियाँमा म असहाय, बेसहारा ... केही पनि काम गर्न, कसैलाई पनि खुसी पार्न असमर्थ मान्छे । म यहाँ हुनु या नहुनुको के अर्थ ? म…